Izikolo ezili-13 eziBalaseleyo zeZidingo zaseFlorida 2022
Oktobha 19, 2021 UAdaeze Nwachukwu
Izikolo ezili-13 eziBalaseleyo zeZidingo zaseFlorida
Zininzi izikolo zeemfuno ezizodwa eMelika nangaphaya kodwa eli nqaku liza kukuhamba ngezona zikolo zibalaseleyo zeFlorida. Izikolo zeemfuno ezizodwa ziyafumaneka kubantu abafuna ingqalelo ekhethekileyo.
Kukho iindidi ezahlukeneyo zabantwana abaneemfuno ezizodwa kuba mhlawumbi abantwana abohlukeneyo baneengxaki ezahlukeneyo. Aba bantwana bakhubazekileyo abanakufunda ngokulula kwizikolo zikarhulumente kwaye ke isidingo sokubabhalisa kwisikolo esineemfuno ezizodwa siphezulu kakhulu.
Zininzi kakhulu kwaye siza kuzama kangangoko ukucebisa uluhlu olufanelekileyo onokukhetha kuzo.
1 Ezona zikolo ziNeeMfuno eziZodwa eziBalaseleyo eFlorida
1.1 1. Isikolo saseMantla eFlorida seMfundo eKhethekileyo
1.2 2. Isikolo seAutism
1.3 3. Isikolo seArbor esiMbindi Florida
1.4 4. IZiko leMfundo ePalm Harbour
1.5 5. IAltantis Academy Amanxweme ePalm
1.6 6. IZiko laseFlorida Autism Centre of Excellence (FACE)
1.7 7. Isikolo Sobuthixo
1.8 8. ISIQULATHO Isikolo seAutism
1.9 9. Isikolo seNtaba ye-Autism (MSA)
1.10 10. IZiko laseLakeland lokufunda
1.11 11. Isikolo iVanguard
1.12 12. IZiko lezeMfundo uLutz
1.13 13. IZiko laseLivingstone Academy Autism
Ezona zikolo ziNeeMfuno eziZodwa eziBalaseleyo eFlorida
Isikolo saseMantla eFlorida seMfundo eKhethekileyo
Isikolo seArbor eCentral Florida
Iziko leZiko lePalm Harbour
Iilwandle zaseAtlantis Academy Palm
IZiko lesikolo uLutz
IZiko laseAustralia Autism lokuGqwesa (FAC E)
Isikolo seNtaba yeAutism
STARS isikolo seAustism
IZiko laseLakeland lokuFunda
IZiko laseLivingstone Academy Autism (i-LAAC)
1. Isikolo saseMantla eFlorida seMfundo eKhethekileyo
Isikolo saseMantla eFlorida seMfundo eKhethekileyo saqala ukubakho ngo-1992 emva kokuba iqela labazali lafumanisa isidingo samathuba angcono emfundo kubantwana babo abathathu abanengqondo eyahlukileyo kunye nophuhliso.
Olu luvo oluqale njengephupha luhambe indlela eyahlukileyo yophuhliso apho abafundi bamkelwa, bakhuliswa, kwaye bafundiswa ngaphandle koxinzelelo lokwenza njengabo abangenakulinganiswa nenkqubo yophuhliso eyahlukileyo.
Emva kweminyaka elishumi elinambini yokusekwa kwayo, iSikolo saseMantla saseFlorida sezeMfundo eYodwa safudukela e-Andersmith Campus eMill Creek Road kwiminyaka elishumi emva kokufuduswa kwabo, isikolo savunywa liBhunga laseFlorida leZikolo eziZimeleyo.
Ukusukela ngoko, isikolo siqhubekile nokukhula ngokungathandabuzekiyo. Sesinye sezona zikolo zibalaseleyo zeemfuno ezizodwa eFlorida ezinceda abafundi abanengqondo kunye nophuhliso umahluko phakathi kweminyaka yobudala eyi-6-22.
Kukwakho nethuba lenkqubo yesidanga sokuqala kubantu abadala abancinci phakathi kwe-22-40.
Isikolo saseMantla eFlorida seMfundo eneeMfuno eziZodwa sigcina umndilili katitshala ukuya kumfundi we-1: 6 kunye namanqanaba emfundo amathandathu ngaphakathi kumagumbi alishumi elinanye.
Ndwendwela iwebhusayithi yeSikolo apha
2. Isikolo seAutism
I-Academy yeAutism yenye yezona zikolo ziBalaseleyo kwiFlorida. Kwaye nje ngeNorth Florida School of Special Education, yasekwa ngumzali wabantwana ababini one-Autism owayefuna ithuba elingcono ebomini, kwimfundo nakuphuhliso lomntwana.
Umsebenzi we-akhademi kukubonelela ngemfundo efikelelekayo eyahlukileyo kwinkqubo yesikolo sikarhulumente ezinokuthi iintsapho ezinengeniso ephantsi kunye nephakathi kunye nabantwana abaneemfuno ezizodwa bazimase.
Isikolo esineqela labaqeqeshi abazinikeleyo kwicandelo lemfundo ekhethekileyo kwaye banesakhono sokusingatha abantwana abane-autism kunye nezinye iziphene zophuhliso.
Phakathi kwezinye iziqinisekiso zemfundo, iqela leengcali linamava ngohlalutyo lokuziphatha, intetho kunye ne-pathology yolwimi, unyango kunye nokusebenza komzimba, imfundo ekhethekileyo yomfundi, i-autism, kunye neminye imiba yophuhliso.
KwiAkhademi yeAutism, abafundi baphathwa ngesidima, kwaye olona hlobo lusemgangathweni lokufunda lomntwana lulungelelaniswa ngokulula maxa onke. Akumangalisi ukuba iAkhademi yeAutism ngokulula yenye yezona zikolo ziBalaseleyo kwiFlorida.
Iindlela zokufundisa kwiAkhademi yeAustism ziguquka rhoqo ngenxa yokuba isikolo samkela iindlela ezintsha zokufundisa kunye neendibano zocweyo kunye neesemina zihlala zikhona ukuze iingcali zihlale zikhona kwaye zihamba ngokulula ngokufundisa abafundi.
Jonga ezinye iinkcukacha kwiwebhusayithi yesikolo
3. Isikolo seArbor esiMbindi Florida
Isikolo seArbor Central seFlorida sasekwa ngonyaka ka2002 ngesicwangciso sokuqala sokunikezela ngoncedo kunyango lwezifundo kunye nonyango lokuthetha kubantwana abanobunzima kuphuhliso.
Eli thuba lalifumaneka kwiminyaka eyi-1-2 ngaphambi kokuba abafundi babuyiselwe kwimeko yemfundo yesiko. Nangona kunjalo, olu lungelelwaniso lwesikolo lutshintshile ukusuka kwixesha elifutshane, eliphakathi ukuya kwisikolo sexesha elide kumabanga, kwaye ngo-2007, kwabakho ukongezwa kwebanga lesi-5.
Isikolo iArbor eCentral Florida sinezikolo eziphakamileyo kunye namanqanaba otshintsho ngokwahlukeneyo.
4. IZiko leMfundo ePalm Harbour
IZiko Academy sisikolo sabucala esizimeleyo esiqhutywe nosapho ukusukela ngo-1968. Inika ikharityhulam yokulungiselela abafundi abanomahluko ekufundeni kumabanga 4-6.
IZiko leMfundo liqinisekisa ukuba ukuzithemba, ukuzithemba, kunye nokuzithemba kwabafundi kukhuliswa ngokusondeleyo ngokuqinisekileyo. Imigaqo-nkqubo yombutho ibandakanya: ukuba abafundi bakhuthazekile ukuba banike konke okusemandleni abo kuyo yonke imisebenzi abayenzayo, ukuba abasebenzi bayakuqonda ukubaluleka komsebenzi wabo, kwaye basebenze ngenzondelelo.
Abasebenzi kunye nootitshala banamava obuchule kwicandelo elikhulu lokungafani kokufunda kunye nemiceli mngeni ebandakanya: i-ADHD, i-autism / i-spectrum / i-Asperger's, i-dyslexia, njl.
Abafundi bonyaka wesikolo banokubhalisa nangaliphi na ixesha lonyaka ukuba nje kukho indawo esikolweni. Ukwamkelwa kwiziko i-Academy Academy ePalm Harbour kungaqala ngomnxeba kumlawuli wesikolo emva koko abazali kunye nabafundi abanokuthi batyelele isikolo badibane nomlawuli ukuze baqiniseke ukuba bafuna iwadi yabo ukuba iye kwiziko i-Academy Academy Palm Harbour.
Isifundo kwiziko i-Academy, iPalm Harbour iza nezicwangciso zokuhlawula ezahlukeneyo kunye nokukhetha kunye nezifundo zokufunda ziyafumaneka. Abafundi abaneSicwangciso se-504 okanye isicwangciso seMfundo ngasinye banokulungela isifundi kwisikolo esibizwa ngokuba yiMcKay Scholarship kwaye uninzi lwabafundi lunokufumana isiqinisekiso soXhobiso lweeNtsapho; Olu khetho luyafumaneka ngokusekwe kwimida yengeniso yosapho okanye iimfuno ezizodwa.
5. IAltantis Academy Amanxweme ePalm
IAltantis Academy Palm Beaches sesinye sezona zikolo ziBalaseleyo kwiFlorida.
Isikolo sasekwa kwi-1996 ukuze abafundi abanengxaki yokufunda kunye nabasokolayo kwimeko yabo yangoku yesikolo bafumane izizathu zokwenza ngcono.
Kwamkela ukubaluleka kobudlelwane obusondeleyo bomzali / bukatitshala / bomfundi ukulungiselela umntwana ngamnye. Kukho umyinge ophantsi womfundi ukuya kutitshala owenza ukuba abafundi bazakhele ukuzithemba nokuzithemba kwabo. Isizathu sokuqala seAkhademi kukhulisa abafundi kwaye babone ukukhula komntwana ngamnye ngokungagungqiyo.
Amabhishi eAtlantis Academy Palm anikezela ngekharityhulam engundoqo ehambelana neMigangatho yeFlorida kubugcisa bolwimi lwesiNgesi, imathematics, isayensi kunye nezifundo zentlalo.
Isikolo sisebenzisa ngokufanelekileyo iteknoloji kuyo yonke imfundiso kunye nophuhliso lwezakhono zentlalo luyabandakanywa yonke imini. Iiklabhu zasemva kwesikolo, ukufundisa, kunye neenkqubo zasehlotyeni zokuphucula amava abafundi.
Ukuza kuthi ga ngoku, isikolo sinerekhodi lamava e-95%, malunga ne-99.9% yabafundi abafumana izifundiswa zikarhulumente, kwaye kukho ipesenti ye-11: 1 yomlinganiso womfundi-katitshala.
Isikolo samkela izicelo unyaka wonke kwaye abafundi bamkelekile yonke imihla. Abafundi abanomdla kulindeleke ukuba bachithe usuku lube lunye kwikhampasi ukuze abafundi kunye nabaphathi besikolo bafunde malunga.
Ngaphambi kokuqalisa kwakhona, umfundi ngamnye kulindeleke ukuba abekhona ngoku kunye noqobo lwala maxwebhu alandelayo:
Isatifikethi saseFlorida sefom yokugonywa (DH680)
Uviwo lwezempilo lokungena esikolweni eFlorida (SH3040)
Ifom yeeNkcukacha zobuqu
Ifom yePhysical Education
Uvavanyo lwe-Psychoeducational (ukuba lukhona)
IsiCwangciso sezeMfundo ngoBuntu (IEP) (Ukuba siyasebenza)
Ikopi yeSatifikethi sokuzalwa
6. IZiko laseFlorida Autism Centre of Excellence (FACE)
Simi njengesinye sezona zikolo zeemfuno ezizodwa eFlorida, isikolo sihleli kufutshane neChurchhill Church of God. Isikolo siqhuba iinkqubo zemfundo zabantwana kunye nabantu abadala abancinci abane-Autism.
Bonke ootitshala kwi-FACE baqinisekisiwe zizikolo zase-Hillsborough County kwaye banesatifikethi semfundo esikhethekileyo kunye nokuqinisekiswa kwe-Elementary K-6 kunye nobuncinci besidanga se-bachelor's nesatifikethi sokufundisa. Ukuzithemba kunye nokuphuculwa kwengqondo kwabafundi kukhuliswa kakhulu.
7. Isikolo Sobuthixo
I-Divine Academy sesinye sezona zikolo ziBalaseleyo kwizidingo zaseFlorida, yasekwa ngonyaka ka-2005 ngu-Ingrid Garcia noPamela Vogelsang.
Bobabini babenezidanga zemfundo eneemfuno ezizodwa kunye namava eminyaka engama-25 kwimfundo eneemfuno ezizodwa zidityaniswe ngexesha lokusekwa kwesikolo.
Besibonile isidingo semfundo ekhethekileyo kulo lonke elaseMelika, babenenjongo yokunika aba bafundi ithuba lokukhula babenakho ukufeza konke okusemandleni abo kwimfundo, ubugcisa kunye nokufundiswa ngezakhono zobomi kwindawo ebamkelayo. Iinkqubo ezikhoyo zizikolo eziphakathi, isikolo esiphakamileyo, kunye neenkqubo zabantu abadala.
Abanye babaqeqeshi abanamava banokubakhathalela abafundi.
Ndwendwela iwebhusayithi yeSikolo
8. ISIQULATHO Isikolo seAutism
ISikolo se-STARS Autism senza ukuba kufumaneke inkqubo yemfundo yesayensi eqinisekisiweyo efanelekileyo kubantwana abaphila ne-Autism ukuze bahlangane nenkqubela phambili kwezentlalo kwaye baqhubele phambili ebomini babo.
Abasebenzi bazibophelele ekulungiseleleni abafundi ukuba baphumelele kwinkcubeko yabo yeelwimi kunye neelwimi ezininzi kwimeko yothando nenyameko. I-STARS isebenzisa iHoughton Mifflin Harcourt kuphuhliso lwekharityhulam. Ikharityhulam ye-STARS ihlaziywa rhoqo kwaye ibandakanya oku kulandelayo:
UbuGcisa, unyango, umdaniso kunye nemidlalo
Iinkqubo zeRobotic kunye neChess
Unyango emsebenzini nasemzimbeni
Intetho kunye nonyango lolwimi
I-STARS umgaqo-nkqubo ongakhethi cala ucebisa ukuba abafundi balo naluphi na uhlanga, umbala, ubuzwe okanye imvelaphi yobuhlanga bayamkelwa ukuba bafunde kwaye bonwabele zonke izibonelelo ezikhoyo njengabanye abafundi. I-STARS isikolo se-autism ngokulula sesinye sezona zikolo zibalaseleyo kwiimfuno ezizodwa eFlorida.
Ubungcali obufumanekayo kubafundi buquka iMcKay Scholarship, i-PLSA Scholarship.
9. Isikolo seNtaba ye-Autism (MSA)
Enye inkolelo eqinileyo yeSikolo seNtaba ye-Autism kukuba wonke umntwana ukhethekile kwaye ufikelela esibhakabhakeni ukuba ukhuliswe ngokufanelekileyo.
Isikolo i-Mountaineers School of Autism sikhulisa abafundi ukuba babe ngabona baphambili kwizifundo, izakhono zentlalo, unyango lwentetho, unyango lomsebenzi, iimbaleki, umculo, ulwimi lwezandla, isakhono sokuphila esizimeleyo, ubuhlobo, inkxaso, ukuthambisa / iioyile ezifanelekileyo, iPads / iTekhnoloji, iSpanish, uphawu ulwimi kunye nemilinganiselo engapheliyo yomonde nothando.
Inkqubo yokwamkelwa ngokuthe ngqo kwaye ayifuni migaqo.
Buza malunga nokwamkelwa okanye ukumiswa kukhenketho.
Thatha uvavanyo lokungenisa, kwaye ulinde ezinye iingcebiso zokwamkela okanye ukwala umfundi ukwamkelwa kwenziwa kwikomiti yesigqeba seMSA.
10. IZiko laseLakeland lokufunda
IZiko laseLakeland lokufunda sisikolo seklinikhi esihambisa iinkonzo kubafundi abafuna iinkonzo zolwimi kunye nengqwalaselo eyodwa. Ubungakanani beklasi ngumlinganiso we-1: 10 kumlinganiselo womfundi katitshala. Kwiziko lokufunda eLakeland, abafundi bawela kwiindidi ezimbini: iimfuno ezizodwa kunye nabaFundi beeLwimi zesiNgesi.
Sesinye sezona zikolo zibalaseleyo kwiimfuno ezizodwa eFlorida. Izicelo zamkelekile nje ukuba kukho isithuba esikolweni.
Ndwendwela iWebhu yeSikolo
11. Isikolo iVanguard
Isikolo iVanguard sesinye sezona zikolo zibalaseleyo kwiimfuno ezizodwa eFlorida. Inomdla wokuzilolongela abantu abatsha kwi-zenith yabo ngokungagungqiyo. Banentanda-bulumko ehlala ihleli yokuba iindlela ezimfutshane azikho imfuneko kwaye azitshati indlela elungileyo ebomini kuba akukho nto ifanelekileyo ifunyanwa ngokulula. Impumelelo enkulu ebomini, abafundi baqeqeshelwa ukwakha izakhono, ukufunda ngokutyibilika, ukunamathela, amandla, ukuzithemba, ukomelela nokuthobeka.
Kukho amathuba abafundi okuba babhalise kwiiklabhu zabafundi, iminyhadala yoluntu, iiprojekthi zenkonzo yoluntu, kunye nezinye izinto ezininzi ezonyusa ukusebenza kolutsha.
12. IZiko lezeMfundo uLutz
IZiko lezeMfundo sisikolo semfundo esikhethekileyo eLutz, ngaphandle kweTampa, eFlorida. Ekuqaleni kwaqala ngo-1968 ngokubonelela ngekharityhulam yekharityhulam yokulungiselela abafundi abakhubazekileyo ekufundeni kumabanga 4-12. Sisikolo sabucala esizimeleyo esivunyiweyo ngokupheleleyo. Abafundi bafundiswa ngokuzithemba nokuzithemba. Abafundi bazibandakanya kukhenketho lwentsimi unyaka wonke ukunceda amandla abo okufunda ngemifanekiso. Amathuba okufundela avulelekile kubafundi. Inkqubo yesicelo icacile.
13. IZiko laseLivingstone Academy Autism
Esinye sezona zikolo zibalaseleyo zeFlorida, ikwiBloomingdale, eFlorida. Sisikolo esizimeleyo, esingenzi nzuzo esijolise ekuhlangabezeni iimfuno ezizodwa zemfundo yabantwana abanokukhubazeka kokufunda i-autism.
Isikolo siqhuba ikharityhulam yaso ngeendlela ngeendlela zokufundisa ngeendlela ezahlukeneyo ukujongana nendlela yokufunda eyahlukileyo yomfundi ngamnye. Abafundi banakho ukufikelela kwimithambo yokuzivocavoca, intetho kunye nonyango, unyango lomsebenzi, uhlalutyo lokuziphatha.
Zingaphi izikolo zeMfuno eziZodwa eFlorida?
Kukho izikolo ezininzi zeemfuno ezizodwa eFlorida kodwa inani eliqikelelweyo malunga nezikolo zeemfuno ezizodwa ezingama-394 eFlorida. Zininzi kakhulu, ke kulula kakhulu ukuba ukhethe okona ukhululeke kuko.
Yintoni iMfundo eKhethekileyo eFlorida
Imfundo ekhethekileyo eFlorida inokuchazwa ngokulula njengemfundiso eyilelwe ukuhlangabezana neemfuno kunye neemfuno zophuhliso lwabantwana abakhubazekileyo eFlorida.
Abantwana ezikolweni abaneemfuno zemfundo ezizodwa ngenxa yokukhubazeka okanye ukudodobala kwinkqubo yophuhliso babizwa ngokuba ngabafundi ababalaseleyo. Uncedo olukhethekileyo abalunikwayo esikolweni lubizwa ngokuba yimfundo ekhethekileyo yabafundi, okanye i-ESE.
I-11 yeeScholarship eziPhezulu zeZifo eziZenzekelayo
Iikhosi eziphezulu ze-13 zasimahla kwi-Intanethi kwi-Psychology yaBantwana
Post Previous:Iinkqubo ezili-10 eziPhambili eziFundisiweyo zeFD kunye neZicelo zoQhagamshelo
Okulandelayo Post:Iikholeji ezili-10 ezilungileyo eCalifornia kwisayikholoji